ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ် သုံးသပ်ချက် – ၂ ( ချန်ပီယံလိဂ် အစဉ်အလာ နဲ့ စပိန် – အင်္ဂလန် အားပြိုင်မှုမှတ်တမ်းများ ) - xyznews.co
May 28, 2022 - by Editor
ဥရောပ ဘောလုံး လောကရဲ့ အကြီးကျယ် အခမ်းနားဆုံး ဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲကြီး ကတော့ ဒီကနေ့ည ကျင်းပမယ့် ဗိုလ်လုပွဲ နဲ့ အတူ ဘောလုံး ရာသီ တရာသီကို အောင်မြင်စွာ ပိတ်သိမ်း တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပဲရစ် မှာ ကျင်းပမယ့် ဒီဗိုလ်လုပွဲ ကို စပိန် ကလပ် ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ အင်္ဂလိပ် ကလပ် လီဗာပူး တို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါတယ် ။
သူတို့ ၂ သင်း ရဲ့ စာရွက်ပေါ်က လူစာရင်း နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ လီဗာပူး က ရီးရဲမက်ဒရစ် ထက် ပိုပြီး အားသာတဲ့ အချက်တွေကို တွေ့မြင်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ မေ့ထားလို့ မရတဲ့ အရာတခု ရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒါကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ အစဉ်အလာ ပါပဲ ။
ချန်ပီယံလိဂ် လို အကောင်းဆုံး အသင်းတွေ အမှားမခံဘဲ ယှဉ်ပြိုင် ကြရတဲ့ ပြိုင်ပွဲကြီးမျိုးမှာ ချန်ပီယံဟောင်းတွေရဲ့ သမ္ဘာနဲ့ အစဉ်အလာ က တကယ့် မိုးထဲရေထဲ ရောက်လာချိန်မှာ အများကြီး စကားပြောသွား တတ်ပါတယ် ။
မန်စီးတီး ၊ PSG တို့လို ငွေကြေး အလုံးအရင်း အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အသင်းတွေ ၊ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ၊ ဒေါ့မွန် တို့လို အကောင်းဆုံးပုံစံကို ခေတ္တရလိုက်တဲ့ အသင်းတွေ ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲကို အရောက်လှမ်း နိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် အမြင့်ဆုံး အောင်ပွဲကိုတော့ ချန်ပီယံဟောင်းတွေ ကသာ ရယူသွားနိုင်ခဲ့ ကြပါတယ် ။
အဲ့ဒါဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ အစဉ်အလာ ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ သမ္ဘာ ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ ဝါ ပါပဲ ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် ဟာ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း ချန်ပီယံလိဂ် ကို ၁၃ ကြိမ် အထိ ဆွတ်ခူး ထားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီလို ဆွတ်ခူး ခဲ့တဲ့ နှစ်တိုင်းမှာ သူတို့ဟာ အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ခဲ့တာပါ ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် သမ္ဘာရင့်မှု က ပြိုင်ဘက်တွေထက် ပိုပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကစားနိုင်စေခဲ့ပြီး အမှားပိုနည်းအောင် ကစားစေနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
၂၀၁၈ ဗိုလ်လုပွဲတုန်းက ဖိုင်နယ် မတက်တာ ၁၁ နှစ် ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ လီဗာပူး ဟာ ၃ နှစ်ဆက်တိုက် ဖိုင်နယ် တက်လာတဲ့ ရီးရဲ ရဲ့ သမ္ဘာကို မယှဉ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ကရီးယပ် ရဲ့ အမှားတွေ ၊ ဘေးလ် ရဲ့ အံ့ဖွယ်ဂိုး ၊ ရာမိုစ့်-ဆာလာ အဖြစ်အပျက်တွေက ပွဲပြီးတဲ့ အထိ ပြောမပြီးခဲ့ပေမယ့် ရီးရဲ ရဲ့ သမ္ဘာကျကျ ကစားသွားနိုင်မှု ကိုလည်း မေ့ပစ်လို့ မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
နောက်တနှစ်မှာတော့ ပိုပြီး သမ္ဘာရင့် တဲ့ လီဗာပူး က အခုမှ ဖိုင်နယ် ရောက်ဖူးတဲ့ စပါး ကို သက်တောင့် သက်သာ နဲ့ အနိုင်ကစားပြီး ချန်ပီယံ အဖြစ် အောင်ပွဲ ခံသွားခဲ့ ပါတယ် ။ ၂၀၁၉ ဖိုင်နယ် မှာလည်း ပထမဆုံး ဖလား ရဖို့ စိတ်လှုပ်ရှား နေတဲ့ PSG ဟာ ဝါရင့်ကြီး ဘိုင်ယန် ကို မလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ဘဲ အရှုံးပေးခဲ့ရ ပါတယ် ။
မနှစ်က ဆိုရင်လည်း မန်စီးတီး က လူအင်အား နဲ့ ခြေစွမ်းပိုသာတယ်လို့ မကစားခင်မှာ သုံးသပ် ခဲ့ကြပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ၁ ခါ ရဖူးပြီး ဖိုင်နယ် ၂ ကြိမ် တက်ဖူးတဲ့ ချဲလ်ဆီး က ပဲ သူတို့အတွက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ဥရောပ ဘုရင်ဘွဲ့ကို သိမ်းပိုက် သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါတွေဟာ ကံကောင်းပြီး တိုက်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး ၊ တခါ နှစ်ခါ ဆိုရင်တော့ ဒါကို ကံလို့ ပြောလို့ရပါတယ် ။ အမြဲလိုလို ဖြစ်နေရင်တော့ ဒါဟာ ထူးဆန်း အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အစဉ်အလာလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ ။
အစဉ်အလာတခုတည်းနဲ့ ချိန်ထိုးရင်တော့ ၁၃ ကြိမ် ကို ၆ ကြိမ်က ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဖလား ပိုများတဲ့ အသင်းကပဲ အမြဲ အသာရနေတာ မဟုတ်သလို လီဗာပူး ကလည်း ဖိုင်နယ် အတွေ့အကြုံ လုံး၀ မရှိတဲ့ အသင်းလည်း မဟုတ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီညပွဲမှာ အစဉ်အလာ က ရီးရဲ အတွက် အရမ်းကြီးမားတဲ့ အားသာချက် အဖြစ် ရှိမနေ နိုင်ဘူးလို့ပဲ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် ကို အားသာချက် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက်တခုကတော့ စပိန် ကလပ်တွေရဲ့ အင်္ဂလိပ် ကလပ်တွေနဲ့ ကစားတဲ့ ဥရောပ ဖိုင်နယ် မှတ်တမ်းတွေပါပဲ ။ ၁၉၉၂ ကစပြီး ချန်ပီယံလိဂ် လို့ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ စပိန် ကလပ်တွေဟာ အင်္ဂလိပ် ကလပ်တွေ နဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေမှာ တွေ့ဆုံတိုင်း လုံး၀ မရှုံးနိမ့် ထားတဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ် ။
စပိန် ကလပ် ဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာ ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ အာဆင်နယ် ၊ ၂၀၀၉ နဲ့ ၂၀၁၁ တွေမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တို့ကို ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲမှာ တွေ့ဆုံပြီး အနိုင်ယူ ဗိုလ်စွဲခဲ့ ပါတယ် ။ ရီးရဲ ကတော့ ၂၀၁၈ မှာ အင်္ဂလိပ် ကလပ် ဖြစ်တဲ့ လီဗာပူး ကို အနိုင်ယူပြီး ချန်ပီယံ ဖြစ်ထားခဲ့တာပါ ။
အင်္ဂလိပ် ကလပ်တွေရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် မှတ်တမ်းကလည်း ထူးဆန်းပြီး အားရစရာ မကောင်းပါဘူး ။ သူတို့ဟာ အချင်းချင်း ပြန်တွေ့တဲ့ All-English Final တွေမှာသာ မိနစ် ၉၀ အတွင်း ရလဒ် ပြတ်သားလေ့ ရှိပြီး အခြားလိဂ် အသင်းတွေနဲ့ ကစားကြတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင် အမြဲလိုလို နောက်ကလိုက် ချေပဂိုးတွေ သွင်းပြီး ရုန်းကန် ကစားရင်းကနေမှ ချန်ပီယံ ဖြစ်လာခဲ့ကြရ ပါတယ် ။
၁၉၉၉ မှာ မန်ယူနိုက်တက် ဟာ ဘိုင်ယန် ကို မိနစ် ၉၀ အထိ ရှုံးနေပြီးကာမှ ရှရင်ဂမ် နဲ့ ဆိုးရှား တို့ရဲ့ နာကျင်အချိန်ပို ဂိုးတွေနဲ့ အံ့ဖွယ် ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါတယ် ။ ၂၀၀၅ မှာ ဆိုရင် လီဗာပူး ဟာ ၃-၀ အရှုံးကနေ ၃-၃ သရေ ကျအောင် ကစားပြီး ပင်နယ်ရောက်မှ အေစီမီလန် ကို နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
၂၀၁၂ မှာ ဆိုရင်လည်း ချဲလ်ဆီး တို့ ဘိုင်ယန် ကို ပင်နယ်တီအထိ ကစားခဲ့ရတာပါ ။
ဒါကြောင့် ဒီညမှာ အင်္ဂလိပ် ကလပ် တသင်း ဖြစ်တဲ့ လီဗာပူး ဟာ အခြားလိဂ် တခုက အသင်းတသင်း ဖြစ်တဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို မိနစ် ၉၀ အတွင်း အနိုင် ကစားနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။
ချန်ပီယံလိဂ် မှာတင် မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒုတိယအမြင့်ဆုံး ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ ယူရိုပါလိဂ် မှာလည်း စပိန် ကလပ်တွေက အင်္ဂလိပ် ကလပ်တွေကို ဗိုလ်လုပွဲတွေမှာ အနိုင် ကစားထားခဲ့ ပါတယ် ။ ၂၀၀၈ တုန်းက ဆီဗီးလား က မစ်ဒယ်ဘရော့ ၊ ၂၀၁၀ မှာ အေတီကို မက်ဒရစ် က ဖူလ်ဟမ် ၊ ၂၀၁၆ မှာ ဆီဗီးလား က ပဲ လီဗာပူး ၊ ၂၀၂၁ မှာတော့ ဗီလာရီးရဲ က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် စတဲ့ ဖိုင်နယ်တွေဟာ အင်္ဂလန် တို့ စပိန် ကလပ်တွေနဲ့ ဆုံလိုက်တိုင်း အမြဲတမ်း ဒုတိယ အကောင်းဆုံးတွေချည်း ဖြစ်ခဲ့ရတာကို သက်သေထူနေခဲ့ပါတယ် ။
ဒါတွေဟာ အလကား တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာချည်းသက်သက်တော့ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး ။
နောက်ဆုံး တချက်ကတော့ ချန်ပီယံတို့ရဲ့ ချန်ပီယံလို့ ဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်းရဲ့ ချန်ပီယံတွေဟာ ခက်ခဲကြပ်တည်းတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ ထွက်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
တနည်းအားဖြင့် ဆိုရရင်တော့ ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် အစမ်းသပ်ခံ လာခဲ့ရတာပါပဲ ။
နောက်ဆုံး ၅ နှစ်ကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီသီအိုရီ ဟာ အတော်လေးကို မှန်ကန်နေခဲ့တာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ ။
၂၀၁၇ တုန်းက ရီးရဲ ဟာ နာပိုလီ ၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ၊ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် တို့လို အသင်းကောင်းတွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဖိုင်နယ်မှာ ယူဗင်တပ် ကို အနိုင် ကစားခဲ့ပါတယ် ။
နောက်တနှစ်မှာလည်း PSG ၊ ယူဗင်တပ် ၊ ဘိုင်ယန် တို့လို ထိပ်သီးအသင်းတွေကို ရှုံးထွက် အဆင့်မှာ အနိုင် ကစားပြီး ရီးရဲမက်ဒရစ် ဟာ ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ ထိုက်တန်ကြောင်းကို ထပ်မံ ပြသခဲ့ပြန်ပါတယ် ။
လီဗာပူး တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုမျိုး ထိုက်တန်ကြောင်း စစ်ဆေး စမ်းသပ်ခံခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ၂၀၁၉ တုန်းက ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ၊ ပေါ်တို ၊ ဘာစီလိုနာ တို့ကို ရှုံးထွက် အဆင့်တွေမှာ ဖြတ်ကျော်ပြီး ဖိုင်နယ် မှာ စပါး ကို အနိုင် ကစားကာ ဥရောပ ရဲ့ ချန်ပီယံ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ ။
ဘိုင်ယန် ချန်ပီယံ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၂၀ မှာဆိုရင်လည်း ဂျာမန် ဘီလူးကြီးဟာ ချဲလ်ဆီး ၊ ဘာစီလိုနာ ၊ လိုင်ယွန် တို့ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတာပါ ။ ဒီအသင်းတွေက အမြင့်ဆုံးခြေစွမ်းမှာ မရှိဘူးလို့ ပြောရရင်တောင် PSG ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းထက်တော့ ပိုပြီး ခက်ခဲတယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာပါပဲ ။
မနှစ်က ဖိုင်နယ်မှာလည်း အေတီကိုမက်ဒရစ် ၊ ပေါ်တို ၊ ရီးရဲ တို့ကို ကျော်လာတဲ့ ချဲလ်ဆီး က မိုချန်ဂလာဘတ် ၊ ဒေါ့မွန် ၊ PSG တို့ကို ဖြတ်ကျော်လာတဲ့ မန်စီးတီး ထက် လမ်းကြောင်းပိုကြပ်ခဲ့ပြီး ချန်ပီယံ ဖြစ်သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီသီအိုရီ နဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ PSG ၊ ချဲလ်ဆီး ၊ မန်စီးတီး တို့ကို ကျော်ဖြတ်လာတဲ့ ရီးရဲ က အင်တာ ၊ ဘင်ဖီကာ ၊ ဗီလာရီးရဲ တို့ကို ကျော်ဖြတ်လာတဲ့ လီဗာပူးထက် ပိုပြီး အစစ်ဆေးခံ ခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။
အစဉ်အလာတိုင်း ကတော့ အမြဲ မမှန်ကန်တတ်ပါဘူး ၊ တခါတလေမှာ အစဉ်အလာ ဆိုတာ ချိုးဖျက် ခံရတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ် ။
စာရွက်ပေါ်မှာ လီဗာပူး တို့သာနေပြီး အစဉ်အလာပိုင်းမှာတော့ စပိန် ကလပ် ဖြစ်တဲ့ ရီးရဲမက်ဒရစ် ကို ချန်ပီယံ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ညွှန်းဆိုနေသယောင်ပါပဲ . . .
ဘယ်ဟာက အမှန်တရား ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို သိရဖို့ ကတော့ သိပ်မကြာတော့ပါဘူးဗျာ . . . ။
Previous Article လီဗာပူး တိုက်စစ်ကစားသမားတွေ မပါ၀င်ခဲ့တဲ့ သူ့စိတ်ကြိုက် dream five-a-side အသင်းကို ရွေးချယ်သွားခဲ့တဲ့ ဗန်ဒိုက်
Next Article ယူနိုက်တက်ရဲ့ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု ဘယ်သူရသင့်သလဲဆိုတဲ့ အပေါ် အမြင်မတူခဲ့ကြတဲ့ ဂန္တဝင် နှစ်ဦး